Ciyaar yahanka caanka ah ee Cristiano Ronaldo ayaa markii shanaad ku guulaystay billadda ciddiga adduunka ugu fiican. Xiddiga reer Bortuqaal ee kooxda Real Madrid ayaa sannadkii labaad oo isku xiga abaalmarintan kaga guulaystay xi...
Maamulka horyaalka Premier Leaque ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda todobada ciyaartoy ee iskugu soo hadhay abaal marinta bishii August ee xidigii horyaalka Premier Leaque ugu fiicnaa. Abaal marinta August 2017 oo noqon doonta a...
Weeraryahanka Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa loo magacaabay xidigii ugu fiicnaa qaaradda yurub xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo ku garaacay kabtanka Juventus Gianluigi Buffon iyo xidiga Barcelona Lionel Messi. Waxey...
Qorituurka isku aadka naadiyada horyaallada Yurub ee 2017/18 ayaa lagu qabtay magaalada Monaco. 32ka kooxood ee u soo gudbay isku aadka guruubyada ayaa loo qaybiyey 8 guruub. Waxay isugu aadeen sidan. Group A: Benfica, Manc...
Manchester United oo dib Heshiis ula saxiixaneysa Ibrahimović
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la filayaa inay toddobaadkan hehsiis cusub la saxiixato weeraryahan Zlatan Ibrahimović, oo hadda aan wax koox ah u cayaarin. Xiddigan 35 jirka ah, ayaa sanadii tagtay u cayaaray Unit...
Neymar oo Eedeyaay guddiga maamula Barcelona
Xiddigii hore ee kooxda Barcelona Neymar, oo hada u dheela kooxda PSG ee dalka Faransiiska, ayaa weerar afka ah ku qaaday guddiga maamula kooxdiisii hore. Neymar oo hadlayey kadib kulankii shalay ay kooxdiisa PSG 6-2 kaga adkaa...
Mo Farah oo Ku Guulaysatay Orodka 10,000 ee Mitir
Hargeysa (Allsomaliland) orodyahanka asal ahaan ka soo jeeda Somaliland, hasayeeshee u orda dalka Ingiriiska ayaa mar kale hantiyay billada orodka 10000 ee mitir. ciyaaryahankan ayaa balan qaaday in uu ciyaaraha ka fadhiisa...
UEFA Oo Soo Saartay Qiimaynta Kooxaha Yurub Iyo Kooxaha Ugu Sareeya
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saaray qiimaynta ay ku samayso kooxaha ay horyaalada Yurub ee ay maamusho waxaana qiimayntan si wayn uga soo dhex muuqday kooxaha ree Spain oo sanadihii ugu danbeeyay wacdaro layaabl...
Weeraryahan Uu Farsamo Cusub Uu Dufacyahan Ku Ceebaystay
Arsenal ayaa ugu dambayn ku guulaysatay in ay gacanta ku soo dhigto xiddigii weerarka uga ciyaari jiray kooxda Lyon ee Alexandre Lacazette xilli ay taageerayaasha kooxdiisu wax badan ka sugayaan xiddigan kadib markii ay kooxdu xil...
Dani Alves ayaa si rasmi ah looga fasaxay kooxda Juventus kaddib markii ay labada dhinac isku raaceen i qandaraaskiisa la baabi’iyo, isagoo haatan xor u ah inuu ku biiro Manchester City. Warkan ayaa waxaa todobaadkii hore sii...